eZee iFeedback – Feedback System |
ezeeitmyanmar@hpmyanmar.com +95940039 3391
eZee IT Myanmar
eZee FrontDesk – Hotel Management Software Myanmar
eZee Reservation – Booking Engine (Online Hotel Booking System in Myanmar)
eZee Absolute – Online Hotel Management System in Myanmar
eZee BurrP! – Restaurant POS Software Myanmar
eZee FrontDesk - Hotel Management Software eZee Burrp! – Restaurant POS Software eZee Absolute – Online Hotel Management System eZee Reservation - Booking Engine eZee iFeedback - Feedback System eZee iMenu - Restaurant Menu Software Appytect - Mobile App Builder
အောင်မြင်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ၏ အဓိကသော့ချက်မှာ customer feedback ကို management မှ တိုက်ရိုက် ရရှိနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
Hospitality နှင့် Restaurant industry တို့တွင် customer များသည် ပျော်ရွှင် မှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှု ပေါ်တွင် ကျေနပ်ခြင်းမရှိပါက Hotel နှင့် Restaurant များ၏ ဝင်ငွေတိုးမှု နှင့် အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
စာရွက်ဖြင့် ဖြည့်ရသော form များမှာ ပျောက်လွယ်ခြင်း၊ Management သို့ တိုက်ရိုက် မရောက်နိုင်ခြင်း၊ ထို feedback form များကို ရေရှည် သိမ်းဆည်း ရန် နှင့် analyze လုပ်ရန် ခက်ခဲခြင်း၊ paper printing form များကို ပုံစံ အမျိုးမျိုး ပြောင်းရန် ခက်ခဲ ခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း တို့ ကြောင့် iFeedback များကို အသုံးပြုလာကြပါသည်။
Survey များကို service, product quality, hygienic, shop atmosphere စသည်ဖြင့် event/department တို့အလိုက် အလိုရှိရာ မေးခွန်း များကို အချိန်မရွေးပြောင်းလဲ နိုင်ပြီး multi language ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
Customer Feedback rate များကို စသည်တို့ ဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း
Customer မှ website, tablet, smartphone, QR codes, Kiosks နှင့် Hotel and Restaurant apps မှ feedback များပေးနိုင်ခြင်း
Customer များ၏ သုံးသပ်ချက် နှင့် personal message များကို comment section မှ အကြံပြုနိုင်ခြင်း
Customer ၏ feedback မှ negative feedback များရှိခဲ့လျင် သက်ဆိုင် ရာ department သို့ အလိုအလျောက် ချက်ခြင်း email ဖြင့် အကြောင်း ကြား ပေးခြင်း
Facebook, Twitter အစရှိသော social media များတွင် customer ၏ positive feedback များကို ဖော်ပြနိုင်ခြင်း
တိကျမှန်ကန်သော Report များကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ internet ရှိရုံဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင် ပြီး customer ၏ လိုအပ်ချက်များကို ပိုမို နားလည်နိုင်ခြင်း
eZee iFeedback ဆက်သွယ်ရန်iFeedback Demo ရယူရန်E-Book ရယူရန်
eZee iFeedback - Feedback System
+95940039 3391
© 2021 eZee Technosys. All rights reserved.